कति छ आज सुनचाँदीकाे मूल्य ? – hamrosandesh.com
कति छ आज सुनचाँदीकाे मूल्य ?
आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार हिजो सुनको मूल्य तोलामा ९१ हजार ३ सयमा कारोबार भएकोमा आज पनि साेही मूल्यमा काराेबार भइरहेकाे महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला ९१ हजार ३ सय रहेको छ भने तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९० हजार ८ सय रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि स्थिर रहेको छ । हिजो १ हजार ३ सय १० रूपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज पनि साेही मूल्यमा काराेबार भइरहेकाे महासंघले जनाएको छ ।
शेयरमा ७५ अंकको पहिरो, १७६ कम्पनी राताम्मे बन्दा महिला लघुवित्तमा उछाल
सरकारले कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै लकडाउनको तयारी गरिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आजको शेयरबजारमा देखिएको छ । आज एकै दिन नेप्से परिसूचक ७५ दशमलव ७९ अंकले ओरालो लागेको हो । सूचकसँगै कारोबारमा आएका सबै समूह राताम्मे बनेका छन् भने ५ कम्पनीबाहेक १ सय ७६ वटै कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ ।
शेयरबजारमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने आशंकाले अहिले खरिद गर्नेभन्दा बिक्री गर्ने लगानीकर्ताको चाप बढेको छ । जसले गर्दा आजको कारोबार ७ अर्ब २८ करोड ४१ लाख ९४ हजार ९ सय १ रुपैयाँको भए पनि शेयरमूल्य भने कसैको बढ्न सकेन ।
आइतबार प्यानिक सेल र प्रोफिट बुक गर्ने हाबी भएका छन् । जसले गर्दा एकै दिन २६ सय ६३ दशमलव ८४ अंकमा रहेको नेप्से सूचक फल भएर २५ सय ७२ दशमलव १७ अंकमा पुगेको छ ।
नेप्से मात्रै नभएर आज ठूला कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि १२ दशमलव ५६ अंकले ओरालो लागेर ४ सय ६४ दशमलव ०५ अंकमा पुगेको छ ।
नयाँ वर्षसँगै शेयरबजारले नयाँ अलटाइम हाई रेकर्ड ब्रेक गर्ने प्रतीक्षामा रहेका लगानीकर्ता कहरले पुन: अर्थतन्त्र ठप्प हुने देखिएसँगै प्यानिक बन्न पुगेको शेयबजारका जानकारहरू बताउँछन् । यसै विषयलाई लिएर शेयरबजार विश्लेषक दिलीप मुनकर्मी आशंकाको भरमा प्यानिक भई शेयर बिक्री नगर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गर्छन् । त्यसो त लगानीकर्ता हरि ढकाल पनि शेयर बुुलिस ट्रेण्डमै रहेकाले आत्तिएर नबेच्न आग्रह गर्छन् ।
आइतबार मात्र १ सय ७६ कम्पनीले शेयरमूल्य गुमाएका छन् । जसमा पहिलो नम्बरमा चन्द्रागिरी हिल्स पर्छ । केही महिनादेखि निरन्तर बढेको सो कम्पनीको शेयरमूल्य ८ दशमलव ४३ प्रतिशतले घटेको छ । यसमा भने कोरोनाको असर भन्दा पनि लामो समय बढेको मूल्यको मौका छोप्दै नाफा बुक गर्ने लगानीकर्ता हाबी हुँदा मूल्य घटेको शेयरबजार जानकारहरूको भनाइ छ ।
योसँगै नारायणी विकास बैंक, रिडि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट बैंक, युनियन हाइड्रोपावर, माथिल्लो तामाकोशी, एनसीसी बैंकलगायतका बैंकहरूको शेयरमूल्य घटेको छ ।
राताम्मे बजारमा चम्किए यी पाँच कम्पनी
७५ अंकले पहिरो गएको बजारमा पनि ५ कम्पनीले भने आफूलाई सुरक्षित राख्न सफल बनेका छन् । अर्थात् यी पाँच कम्पनीको शेयरमूल्य आज बढेको छ । जसमा पहिलो नम्बरमा आउँछ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था । यस कम्पनीको सकारात्मक सर्किट लाग्दै प्रतिकित्ता १ सय ९९ रुपैयाँले शेयरमूल्य बढेको छ । आज एकै दिन महिला लघुवित्तको २१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ शेयर किनबेच भयो ।
करिब अढाइ महिनापछि कारोबार फुकुवा भएको विशाल बजार कम्पनीलाई पनि आज घटेको बजारले छुन सकेन । यस कम्पनीको ९ दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता ३ सय १६ रुपैयाँले शेयरमूल्य बढेको छ । योसँगै कालिका पावर कम्पनीको ३ दशमलव ४५ अर्थात् प्रतिकित्ता १० रुपैयाँ, मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्टको ३ दशमलव ०५ अर्थात् प्रतिकित्ता ४९ रुपैयाँ, गुडविल फाइनान्सको ० दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १ रुपैयाँले शेयरमूल्य बढेको छ ।
कारोबारमा निफ्रा अगाडि
आजको कारोबारमा सर्वाधिक शेयर कारोबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)को भएको छ । निफ्राको एकै दिन ३९ करोड ५२ लाख ५२ हजार ६ सय ४० रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ । योसँगै दोस्रोमा ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स छ । यसको ३३ करोड ८५ लाख ६२ हजार ७ सय २७ रुपैयाँको शेयर किनबचे भयो । योसँगै आइतबार माथिल्लो तामाकोशी, नबिल बैंक, एनआईसी एसिया बैंकको शेयरको पनि सर्वाधिक कारोबार भएको छ ।